အရမ်းပိန်သူများ ကျစ်ပြီးထွားလာဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ??? ( Skinny to Fit ) – TodayZ
အရမ်းပိန်သူများ ကျစ်ပြီးထွားလာဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ??? ( Skinny to Fit )
အဲ၊ သင်ဟာ ပိန်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံယူထားသူတစ်ဦး ဆိုပါတော့။ ပိန်ရာကနေ ထွားလာဖို့ ဆောင်းပါးတွေ ရှာတဲ့နေရာမှာ တစ်လောကလုံးက သင့်ကို ဖယ်ကျင်နေပါလားလို့ ခံစားကောင်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Fitness နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Page တော်တော်များများက Weight ကျဖို့ချည်း ပြောကြတာကိုး။
ဒါမှမဟုတ် ရပ်ကွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Facebook ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိန်လွန်းလို့ ကူကြ ကယ်ကြပါဦးများ မပြောလိုက်နဲ့၊ သင့်ကို ပြူးပြဲ အံ့သြသလိုမြင်ကြမှာလဲ မဆန်းပါဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့ သင့်အဖြစ်က ပေါင်တွင်းသား ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်သလိုပဲ၊ အော်ရင်လဲ ကိုယ်ဘာဖြစ်လဲ မမြင်ရမယ့်တူတူ ကြိတ်ခံနေရတာနဲ့ တူပါလေရော။
ဒါပေမယ့် ပိန်သူတွေမှာလဲ သူ့လိုချင်စိတ်၊ သူ့ပန်းတိုင်နဲ့ သူပါ။ အရမ်းဝနေလို့ ကမ်းခြေတွေမှာ အင်္ကျီချွတ် ဓါတ်ပုံမရိုက်ချင်သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိသလို ပိန်သူတွေလဲ မချွတ်ချင်တဲ့သူ ဒုနဲ့ဒေးပေါ့။ ဒါဆို ဝသူတွေအတွက် Beach body နဲ့ လန်းသွားအောင် ဆောင်းပါးတွေရှိရင် ပိန်သူတွေအတွက်လဲ လန်းလာအောင် အကြံပေးဆောင်းပါးတွေ မရှိသင့်ဘူးလား။
အဖြေက ရှိသင့်တာပေါ့ မလို့ ဒီတစ်ခေါက် Golden_Dreams page အနေနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ သူများတွေ မျက်ကွယ်ပြုချင်ပြုမယ်၊ ဒီမှာတော့ မပြုပါဘူးလို့ ပြောရင်း စလိုက်ရအောင်။
၁။ ထွားလာခြင်း အခြေခံ
အခြေခံဆိုတဲ့ အတိုင်း တစ်ချို့သိပြီးဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
#Weight တက်လာဖို့အတွက် သင်တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားသွားလာ သုံးနေတဲ့ စွမ်းအင်ထပ် ပိုစားဖို့လိုပါတယ်။
ဒါ့ထပ် ရှင်းရှင်းပြောရရင် စားသာစား၊ Weight မတက်မချင်းစားပါလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ အပေါ်မှာ ဒီအခြေခံတစ်ချက်ကို လူတစ်ချို့သိမယ်ဆိုခဲ့တာက တစ်ချို့ကျ တစ်ကယ်ကို မသိလို့ပါပဲ။
” Weight တက်ချင်လို့ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ ”
ဒီလိုမေးခွန်းအစား Weight တက်အောင် ဘယ်လိုစားရမလဲကို ခေါင်းထဲမှာ အရင်ထားပါ။
ထွားလာဖို့ စားရမယ်ဆိုတာ သိအပြီးမှာ ဘယ်လိုပုံမျိုးထွားလာနိုင်လဲဆိုတာလဲ သိဖို့လိုပါတယ်။
#လူတစ်ယောက်ရဲ့ Weight အပြောင်းအလဲဟာ ကြွက်သားနဲ့ အဆီအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
Weight ကျလား။ ဒါဆို ကြွက်သား၊ အဆီ ကျချင်တာကျမယ်။
Weight တက်လား။ ဒါဆို ကြွက်သားပဲ တက်တာလား၊ အဆီပဲ တက်လာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီး တက်လာတာလား။ တစ်ခုခုပါပဲ။
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ Weight တက်လာလာ၊ Weight တက်ပြီ ဆိုကတည်းက တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားတာထပ် ပိုကို စားလို့ပါဆိုတာကို နံပတ် ၁ မှာပြောခဲ့တယ်။
နံပတ် ၁ မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်ဟာ အခု ထွားလာပုံအမျိုးမျိုးမှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်
Weight တက်တယ် = အဆီတွေချည်းတက်လာတယ်
ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် သင်ဟာ ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အစားရွေးတဲ့ နေရာမှာလဲ ဘာစားစား အရေးမကြီးပါဘူး။ တစ်နေ့တာ သုံးတာထပ်ပိုအောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတာတွေပဲစားစား၊ မညီတာတွေပဲ စားစား အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။
Weight တက်တယ် = ကြွက်သား + အဆီတက်လာတယ်
ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် အလေးဆော့ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အလေးလွတ် ဘားခို၊ ဒိုက်ထိုး စတာတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
Equation မှာ (ကြွက်သား) ဆိုတဲ့ အရာပါလာရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက်၊ တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် လေးလံတာတွေနဲ့ စိန်ခေါ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။
အစားအသောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Equation မှာ (အဆီ) ဆိုတဲ့ အရာပါလာတာက
– ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတာတွေ၊ ကြွက်သားတက်မယ့် Protein တွေ စားပေမယ့် လိုအပ်တာထပ် ပိုသွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးဆို တစ်လကို ၁.၅ ပေါင်လောက်ပဲ ကြွက်သားတည်ဆောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ၃ ပေါင်လောက် တက်အောင်စားရင် ၁.၅ ပေါင်ဟာ အဆီပါပဲ။ မိန်းကလေးဆိုတစ်လကို ပေါင်ဝက်ကျော်လောက်ပဲ ကြွက်သားဆောက်နိုင်ပါတယ်။
– ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတာတွေ စားတာပိုများလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလေးဆော့နေသေးတော့ ကြွက်သားတော့ နည်းနည်းတက်နိုင်သေးတာမလို့ ကြွက်သား+အဆီ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတာတွေများလေ အဆီပိုများလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Weight တက်တယ် = ကြွက်သားပဲတက်တယ်
ဒီအခြေအနေဟာ အဖြစ်ချင်ဆုံး အခြေအနေပါပဲ။ အရမ်းလဲ စည်းကမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။
(ကြွက်သား) ဆိုတာ Equation မှာပါလို့ အလေးဆော့ဖို့လိုပါတယ်။
အစားအသောက်ပိုင်းမှာတော့ အခြေအနေ ၂ နဲ့ အနည်းငယ်ဆင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့၊ ကြွက်သားတည်ဆောက်ပေးမယ့် အစားအသောက်တွေကို ယောင်္ကျားလေးဆို တစ်လ ၁ ပေါင်နှုန်း၊ မိန်းကလေးဆို ပေါင်ဝက်နှုန်းတက်အောင် စားရပါမယ်။
တိကျနိုင်လေ ကြွက်သားပဲ အသစ်ဖြစ်လေပေါ့။ အနည်းငယ်ပိုသွားရင်တော့ အဆီအနည်းငယ် ရောတက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီအနည်းငယ်ဆိုတာ ပြသနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝအားဖြင့်လဲ အဆီပါတက်လေ့ရှိတာမလို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
ဒီတော့ Weight တက်လာမယ့် အခြေအနေ ၃ မျိုးမှာ သင့်ကို ကြည့်ကောင်းစေမယ့် Weight တက်ခြင်းဟာ အခြေအနေ ၂ နဲ့ ၃ ဖက်စပ်ကြားပါပဲ။ ကြွက်သား ပမာဏများများနဲ့ အဆီ အနည်းငယ်ပဲ ပါမယ့် Weight တက်ခြင်းပေါ့။
ဒီလိုဖြစ်အောင် အလေးဆော့ရမယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတဲ့ ကြွက်သားတက်စေမယ့် အစားတွေ စားရမယ်။ ဒီထိကို ရင်ထဲ စွဲပြီဟုတ်။
ဒါဆို အလေးဆော့ခြင်းအပိုင်းကို ဆက်ကြည့်မယ်။
Workout တစ်ခုပြီးတယ်၊ Gym သွားတယ်ဆိုတိုင်းလည်း ကြွက်သားတက်လာမယ် မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့်လဲ တစ်ချို့ Gym သွားသူတွေဟာ Weight ကျလာတယ်၊ ပိန်သွားတယ်။ ကြွက်သားတွေနဲ့တော့ ကျစ်မလာဘူး။
တစ်ချို့ကျတော့ ဝနေရာကနေ ပိန်သွားရုံတင် မကဘူး၊ ကြွက်သားတွေနဲ့ပါ ကြည့်ကောင်းလာတယ်။ ဒါဟာ လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်မှုတွေအပေါ် အများကြီး မူတည်ပါတယ်။
* ပြေးခုန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလား
* ဇွန်ဘာ အကလေ့ကျင့်ခန်းတွေလား
* လက်ဝှေ့ထိုးတဲ့ သင်တန်မျိုးလား
* Whole body circuit သင်တန်းမျိုးလား
၂-ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သား လေ့ကျင့်ပေးမယ့်
* အလေးလွတ် တစ်ဆင့်ချင်းတိုးတိုး စိန်ခေါ်တာ
မျိုးတွေ ရွေးချယ်မှာလား။ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သင်ဟာ ပိန်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးချယ်စရာ (၁) အဆီချတာကို ရွေးချယ်နေရင် အစကတည်းက Weight တက်ရခက်နေပါတယ်ဆိုမှ ပိုခက်အောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေတော့မှာပါပဲ။ ဒီတော့ နံပတ် ၁ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ No No ပါပဲ။
ဒီတော့ နံပတ် (၂) ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကြွက်သားတက်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုပါတော့။ အလေးလွတ်နဲ့ဆော့တာကြွက်သားတက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အချိန်တန်ရင် အလေးဆော့တာကို ပြောင်းသင့်တာမလို့ အလေးဆော့မယ့် အကြောင်းကို ပြောပါမယ်။
အလေးဆော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ရမလဲ။
ကြွက်သားတက်ဖို့အတွက် အခြေခံ သုံးချက်ရှိပါတယ်။
၁- ပိုပြီး လေးလံတာကို လုပ်နိုင်လာခြင်း
၂- ကြွက်သားတစ်ခုကို လုံလောက်တဲ့ ကြာချိန်နဲ့ စိန်ခေါ်ခြင်း
၃- အစားအသောက် အာဟာရလုံလောက်စွာစားခြင်း၊ နားနေခြင်း
သင်ဟာ ပိန်လို့ Weight တက်ဖို့ခက်သူ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ Gym မှာ စွမ်းအင်တွေ ဖြုန်းတီးဖို့ မသင့်တာကြောင့် မိနစ် ၄၀-၆၀ အချိန်တိုအတွင်း ပြန်ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။
အပေါ်က ကြွက်သားတက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်ရယ်၊ အချိန်တိုအတွင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သင့်တဲ့ အချက်ရယ် နှစ်ခုကို ထည့်စဉ်းစားတဲ့အခါ လုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကြွက်သားအများအပြား သုံးတဲ့ Compound လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။
ကြွက်သား အနည်းအကျဉ်းပဲသုံးတဲ့ Isolation lift နဲ့ ကြွက်သား အများအပြားသုံးတဲ့ Compound lift နှစ်ခု ဘာကွာလဲကို အကျဉ်းပြောပါမယ်။
– ကြွက်သား အနည်းအကျဉ်းပဲသုံးတဲ့ Isolation lift
လက်မောင်းဆော့တာ၊ ခြေသလုံးဆော့တာမျိုးဟာ Isolation lift တွေပါပဲ။ လက်ဆိုရင် လက်ပဲသုံးရပြီး တခြား အစိတ်အပိုင်းတွေ မသုံးရပါဘူး။
– ကြွက်သားအများအပြားသုံးတဲ့ Compound lift
ရင်ဘတ်တွန်းတာ၊ ဘားခို၊ ထိုင်ထတွေဟာ Compound lift တွေပါပဲ။ ဘားခိုတဲ့အခါ နောက်ကျောကြွက်သား၊ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား၊ လက်မောင်း၊ ပုခုံး စတာတွေဟာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ကြွက်သားအများအပြားကို လေ့ကျင့်တာပေါ့။
ဒီတော့ သင့်အတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့၊ မပါမဖြစ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ချို့ကို အောက်မှာပြလိုက်ပါတယ်။
* Squat ( ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Bench press (ရင်ဘတ်၊ လက်မောင်းနောက်၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Deadlifts (ပေါင်၊ တင်ပါး၊ နောက်ကျော၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Barbell row ( နောက်ကျော၊ လက်မောင်းရှေ့၊ ခါးနောက်၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Overhead press ( လက်မောင်းနောက်၊ ဆုံ၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Pull ups (လက်မောင်း၊ နောက်ကျော၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Dips (လက်မောင်းနောက်၊ ရင်ဘတ်၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Landmine press (လက်မောင်းနောက်၊ ရင်ဘတ်၊ ဆုံ၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Glute Bridge (ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ဗိုက်ကြွက်သား)
* Abs (ဗိုက်ကြွက်သား)
တစ်ရက်အတွင်း မျိုးစုံလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာ ရင်ဘတ်နေ့ဆိုရင် Bench press၊ Dips စတာတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ပါ။ အောက်ပိုင်းဆိုရင် Deadlift ၊ Glute bridges ၊ Squat ကိုလုပ် စသဖြင့်ပေါ့။
လုပ်တဲ့အခါ ၁၂ ကြိမ် x ၅ ကြော့လုပ်ပါ။ Pull ups နဲ့ Dips ကတော့ ကိုယ်ရသလောက်လုပ်။ တစ်ချို့အတွက် ၃ ကြိမ်ပဲရတယ်ဆိုလဲ ၃ ကြိမ်။
ပိန်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ Beginner တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင် နှောကြေအောင် လုပ်ပါ။ အောက်မှာ ပုံတွေပြထားတာမလို့ Gym က Trainer တွေကိုလဲ လုပ်ပုံလုပ်နည်း မှန်မမှန် ကြည့်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ လက်မောင်း၊ လက်ဖျံ၊ ဂုတ်သား စတဲ့ တစ်ခုချင်းစီ Isolation lift တွေကို ခဏ ခေါင်းထဲက ထုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ဒီ Compound လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ၁၀ ပေါင်အလေးလောက်ပဲ ရစေအုန်း၊ တစ်နေ့ထပ် တစ်နေ့ ပိုသန်မာလာအောင် ကြိုးစားပါ။
အစားအစာ အာဟာရလဲ လုံလောက်စွာရတယ်၊ ဒီ Compound lift တွေမှာလဲ တစ်ပတ်ထပ် တစ်ပတ် ပိုသန်မာလာတယ်ဆိုရင် ကြွက်သားအသစ်တွေ ထွက်လာမှာ မလွဲပါပဲ။
အဲ၊ အစားအစာ အာဟာရလဲ လုံလောက်စွာရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအစားအစာတွေ စားနိုင်လဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်။
အစားအစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခေါင်းထဲအရင်ရောက်ရမှာက အများကြီး၊ အများကြီးစားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သင့် တစ်သက်တာလုံး ပိန်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်လောက်စားစား မဝခဲ့ဘူးဆိုခဲ့တယ်ဟုတ်။ ဒီနေရာမှာ သင်စားတာ သင်ထင်သလောက် ပမာဏများချင်မှ များမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ရက်တစ်လေ အများကြီးစားလိုက်၊ ကျန်ရက်တွေကျ လိုသလောက် မစားလိုက်။ ဒီလိုလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါတွေကို ပြင်ဖို့အတွက် လိုတာထပ် ပိုစားရမှာပါပဲ။
တစ်လကို တစ်ပေါင်ကျော်၊ နှစ်ပေါင်ဝန်းကျင်တက်ဖို့ဆို အခုစားနေတာထပ် တစ်နေ့ကို Calories 200 ပိုစားရမယ့် သဘောမှာရှိပါတယ်။ ဒါကိုမှ သင်ဟာ အလေးဆော့မယ်ဆိုရင် တစ်နာရီ Workout ဟာ Calories 200/300 ဝန်းကျင်။ ဒီတော့ တစ်နေ့ကို Calories 300/500 အထိ ပိုစားရပါမယ်။ နောင်တစ်ခုက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် အစာခြေအားလဲ ပိုကောင်းလာနိုင်တာမလို့လဲ အများကြီးစားဖို့ လိုတယ်ပြောရတာပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ သင်ဟာ အရင်က တစ်နေ့ကို Calories 1200 ခန့်စားတယ်ဆိုပါဆို့။ ဒီတော့ ပိုစားရမယ့် ပမာဏကို စားတဲ့အခါ ထည့်ပေါင်းစားရင်စား၊ ဒါမှမဟုတ် ကြားမှာ Snack သို့မဟုတ် နောင်တစ်နပ်စားပေါ့။
အာဟာရလဲများမယ်၊ ကြွက်သားတက်ဖို့လဲ အကူအညီပေးမယ်၊ နာကျင်မှုတွေကိုလဲ သက်သာစေမယ်၊ Weight တက်ဖို့လဲ ကူညီပေးမယ့် အစားအစာတွေကို အောက်မှာပြလိုက်ပါတယ်။
* ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပေါင်မုန့်
* မြေပဲစေ့၊ သီဟိုစေ့၊ Almond စေ့ စသည်
* Cheese ၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့၊ Chocolate milk
* သံလွင်ဆီ၊ နှမ်းဆီ
* Salmon ငါး
ဒီ List ထဲက အစားအစာတွေဟာ Calories များပြီး အပေါ်က ကောင်းကျိုးအချက်အလက်တွေနဲ့လဲ ညီပါတယ်။ ဝရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတဲ့ Pizza ၊ Cream ၊ ကိတ်မုန့်တွေတော့ ဒီမှာ မညွှန်းပါဘူး။
သင့်ရည်ရွယ်ချက်က ကြည့်ကောင်းအောင် ဝချင်တာ၊ အဆီတွေနဲ့ ဖိုင့်ချင်တာမှ မဟုတ်ပဲ။
ဒီတော့ သင်လုပ်သင့်တာတွေကို အကျဉ်းပြန်ချုပ်ရရင်
– Weight တက်ဖို့ဆိုရင် သုံးတဲ့ စွမ်းအင်ထပ် ပိုစားရပါမယ်။ တခြားနည်းမရှိ။
– Weight တက်တဲ့နေရာမှာ ကြွက်သားတက်ချင်ရင် အလေးဆော့ရပါမယ်။
– အလေးဆော့တဲ့အခါ အဆီကျလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တက်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး ကြွက်သားတက်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမယ်။
– လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာ Compound လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အမြဲအလေးထားပြီး ပိုပိုစိန်ခေါ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။
– အစားစားတဲ့အခါမှာ အပေါ်ကပြထားတဲ့ List ထဲမှာပါတဲ့ အစာတွေကို ရွေးချယ်စားပါ။ အလေးဆော့နေသူတိုင်းဟာ အသားငါး များများစားဖို့လဲလိုပါတယ်။
– အများကြီးစားဆိုတဲ့ နေရာမှာ ယောင်္ကျားလေးဆို တစ်လကို ၁-၁.၅ ပေါင်ကြားတက်အောင်စားပါ။ မိန်းကလေးဆို တစ်လ ၁ ပေါင်ဝန်းကျင်တက်အောင်စားပါ။
ဒီအပေါ်က အချက်တွေကိုလိုက်နာသရွေ့ ပိန်ရာကနေ ကျစ်လျစ်ဖွံ့ထွားလာဖို့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ မှားစရာအကြောင်း မရှိသလို နည်းလမ်းတွေကလဲ မရှုပ်ထွေးပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာချင်တာတစ်ခုက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖို့ဟာ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ရှိဖို့လိုတာမလို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လူဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ချိုးရေလို့ ရတာပါပဲ။
ဒီတော့ နည်းတွေလဲ ရပြီ၊ အားတွေလဲ ရှိပြီဆိုရင်ဖြင့် ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ပါလို့ နောက်ဆုံးမှာချင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်၊ တစ်လ …. သုံးလ ……. ခြောက်လတန်သည်မှာ ပိုသန်မာ ပိုလှလာမယ့် သင့်ကို မြင်တွေ့ချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးလိုက်ရပါတယ်။
crd – Golden_Dreams
လေဆာ သွားတိုက်ဆေး၏ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာပြား အစုံ ၁၈၀ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်မှ ကံထူးရှင် ၁၂၀ ဦး ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်
စင်ကာပူမှာ Service Sector မှ နိုင်ငံခြားသား Quota လျှော့ချရခြင်း
ကျောင်းသားလူငယ်များအကြား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို တိုက်တွန်းအားပေးရန် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းနှင့် မိဘမဲ့ကလေးစာသင်ကျောင်း ၃၃ ကျောင်းတို့ကို ခြေနင်းလက်ဆေးစင်နှင့် လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်များလှူဒါန်း
🌷🌷🌷 လောကသဘော လူ့မနော 🌷🌷🌷
ကွန်ရက်ကို 4.5G သို့ မြှင့်တင်ပြီး ဆန်းသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများ တယ်လီနော မိတ်ဆက်
မြန်မာ့ပထမဆုံး အွန်လိုင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြိုင်ပွဲ “APPathon” တွင် အနိုင်ရရှိသူများကို ကြေညာ
" နန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးစုဘုရားလတ် နောက်ဆုံးခရီး "
လူတွေ ဘာကြောင့် ဒေါသထွက်ရင် အော်ပြောသလဲ?😊